प्यालेष्टाइनका जनतामाथि इजरायलद्वारा भैरहेको बर्वर आक्रमण र त्यहाँ भैरहेको नरसंहारको ने.क.पा.(मसाल)ले तीव्र भत्सर्ना गर्दछ । अमेरिकन साम्राज्यवादको सहायताले नै इजरायल लगातार प्यालेष्टाइनमाथि आक्रमण गर्न सफल भैरहेको छ । अमेरिकन साम्राज्यवाद विश्वभरमा नै युद्ध आक्रमणहरूको मुख्य केन्द्र बनेको छ । त्यसकारण इजरायलद्वारा प्यालेष्टाइनका जनतामाथि भैरहेको आक्रमणका सन्दर्भमा पनि अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा नै आवाज उठाउनुपर्ने कुरा मा जोड दिन्छ । अन्तमा आफ्नो स्वतन्त्रता र न्यायको लागि करिब आधा शताब्दीदेखि युद्धरत प्यालेष्टाइनी जनतासित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र र न्यायको सङ्घर्षमा उनीहरूको विजय हुनेछ भन्ने कुरामा हामीले पूर्ण विश्वास प्रकट गर्दछौँ ।
सिन्धुपाल्चोकको पहिरो र त्यसबाट भएको ठूलो धन, जनको क्षतिलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिंदै त्यहाँ उक्त घटनाबाट पीडित जनताप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । त्यो प्राकृतिक प्रकोपद्वारा पीडित जनताको सहायतामा उद्धारका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो पार्टीले सरकारसित माग गर्दछ ।
सिन्धुपाल्चोक घटना एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो । तर त्यस प्रकारका घटनाहरूलाई खालि प्राकृतिक मात्र भनेर पुग्दैन । मानव समाजद्वारा पर्यावरणको विनाश वा त्यही प्रकारका अन्य कतिपय गम्भीर प्रकारका गल्तीहरूका कारणले पनि त्यस प्रकारका घटनाहरू हुने गर्दछन् र देशका विभिन्न भागहरूमा लगातार हुने गरेका छन् । पर्यावरणको विनाशका साथै त्यस्ता घटनाहरूमा अरू वृद्धि हुने सम्भावना हुनेछ । त्यसकारण पर्यावरणको रक्षाको लागि पनि देशव्यापी रूपमा नै ठोस राष्ट्रिय नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
मानव चेतनाको विकास तथा अहिलेको विज्ञान र प्राविधिक विकासको युगमा प्राकृतिक प्रकोपहरूमाथि काफीहदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ वा तिनीहरूको असरलाई कम गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा पनि उक्त कार्यहरूको लागि कैयौँ निकायहरू बनेका छन् । तर सरकार वा विभिन्न निकायहरूको त्यसप्रति कम ध्यान जाने गरेको छ र त्यसको परिणामस्वरूप नै जनताले त्यस प्रकारका घटनाहरू वा तिनीहरूबाट उत्पन्न स्थितिबाट बढी कष्ट भोग्नु परिरहेको छ । जे होस् सिन्धुपाल्चोक र अन्य भागहरूमा प्राकृतिक प्रकोपहरूमा पीडित जनताको सहायताका लागि तुरुन्त प्रभावशाली कदम उठाउनुका साथै त्यस प्रकारका घटनाहरूको रोकथामका लागि आवश्यक अध्ययन र तैयारीका लागि प्रभावशाली योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो पार्टीले सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
चरीको हत्याप्रकरणमा संसदभित्र र बाहिर भैरहेको चर्चाप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त हत्या इन्काउण्टरमा गरिएको हो वा सुनियोजित गैरन्यायिक हत्या हो ? त्यसबारे बेग्लाबेग्लै मतहरू प्रकट भएका छन् । त्यो कुरा जे भएपनि त्यसबारे उच्चस्तरीय छानवीन गरेर सत्य र तथ्य के हो ? त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यस सन्दर्भमा त्यससित जोडिएको एउटा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । उक्त व्यक्ति एमालेको एउटा क्षेत्रको उपाध्यक्ष भएको भन्ने कुरालाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा लिन्छौँ । उनको हत्या इन्काउण्टर वा गैर न्यायिक जुनसुकै रूपमा भए पनि उनी एकजना कुख्यात अपराधी भएको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यस प्रकारको व्यक्ति एउटा राजनीतिक सङ्गठनको क्षेत्रस्तरीय नेतृत्वमा रहनु सामान्य कुरा होइन । त्यसले देशको राजनीतिमा अपराधिकरण बढ्दै गएको कुरालाई बताउँछ । त्यस प्रकारको प्रवृत्तिले देशको राजनीतिलाई दुषित पार्दै लैजाने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले देशको राजनीतिमा बदलिदै गएको त्यस प्रकारको अपराधिकरणप्रति हामीले सबै राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
मिति ः २०७१ श्रावण २४ गते